Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.5 Famaranana
Big tahirin-kevitra dia na aiza na aiza, fa mampiasa azy io sy ny hafa karazana tahirin-kevitra ho an'ny fiaraha-monina observational fikarohana dia sarotra. Raha ny zavatra niainako dia misy zavatra toy ny tsy misy sakafo maimaim-poana ho an'ny fikarohana fananan'ny: raha tsy nataony tao be dia be ny asa manangona tahirin-kevitra, dia ianao angamba ho tsy maintsy nandatsaka be dia be ny asa fandinihana ny angon-drakitra na eo amin'ny mieritreritra ny ao mahaliana fanontaniana mba hangataka ny tahirin-kevitra. Miorina amin'ny ny hevitra ao amin'ity toko ity, heveriko fa misy fomba telo lehibe izay angon-drakitra lehibe loharanom-baovao dia ho sarobidy indrindra ho an'ny fiaraha-monina fikarohana:
empirically adjudicating eo mifaninana teorika filazana mialoha. Ohatra ity dia ahitana karazana asa Farber (2015) (New York mpamily fiarakaretsaka) sy King, Pan, and Roberts (2013) (ny sivana any Shina)
nohatsaraina fandrefesana ara-tsosialy ho an'ny politika amin'ny alalan'ny nowcasting. Ohatra iray io karazana asa dia Ginsberg et al. (2009) (Google Trends gripa).
estimating causal voajanahary vokatry amin'ny fanandramana sy ny mifandraika. Ohatra toy izany ny asa. Mas and Moretti (2009) (handinika vokany eo amin'ny vokatra) sy Einav et al. (2015) (vokatry ny vidin'ny manomboka amin'ny Auctions amin'ny eBay).
Maro ireo fanontaniana manan-danja eo amin'ny fiaraha-monina dia azo naneho fikarohana tahaka ny anankiray amin'izy telo lahy. Na izany aza, ireo mpikaroka mitaky fomba fijery ankapobeny mba hitondra zavatra betsaka ho an'ny angon-drakitra. Inona no mahatonga Farber (2015) mahaliana dia ny ara-antony manosika ny fandrefesana. Izany ara-antony manosika dia avy any ivelany ny angona. Araka izany, ho an'ireo izay mahay mangataka karazana fikarohana sasany fanontaniana, angon-drakitra loharano lehibe mety ho tena mahavokatra.
Farany, fa tsy teoria-nandroaka empirical fikarohana (izay efa ny fifantohana amin'ity toko ity), dia afaka handrehitra ny soratra sy hamorona empirically-noroahina theorizing. Izany hoe, amin'ny alalan'ny fanangonan-karena ny empirical tsara zava-misy, fomba, sy-tsaina isika dia afaka manorina teoria vaovao.
Io safidy, angona-voalohany fomba teoria Tsy zava-baovao, ka dia tena kery rijan amin'ny Glaser and Strauss (1967) ny antso ho an'ny hiorina teoria. Ity tahirin-kevitra-fomba voalohany, na izany aza, tsy midika "ny faran'ny teoria," araka ny efa nilaza haben'ny ny fanaovan-gazety manodidina ny fikarohana ao amin'ny vanim-potoana nomerika (Anderson 2008) . Kosa, araka ny angona tontolo iainana fiovana, dia tsy maintsy manantena ny famerenana ny mampifandanja ny ao amin'ny fifandraisana misy eo teoria sy ny tahirin-kevitra. Ao anatin'ny tontolo izay fanangonana antontan'isa dia lafo, dia misy dikany ny ihany no hanangona ny tahirin-kevitra fa ny teorian'ny soso-kevitra dia ho ny tena ilaina. Kanefa, ao amin'ny tontolo iray izay be dia be ny tahirin-kevitra dia efa azo maimaim-poana, dia misy dikany ny ihany koa ny miezaka ny data-fomba voalohany (Goldberg 2015) .
Araka ny efa hita ato amin'ity toko ity, mpikaroka afaka mianatra betsaka amin'ny alalan'ny fijerena ny olona. Amin'ny manaraka telo toko, aho mamaritra ny fomba ahafahantsika mianatra bebe kokoa sy zavatra hafa raha mampifanaraka ny fanangonana antontan'isa sy mifandray amin'ny olona kokoa azy ireo mivantana amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana (Chapter 3), nihazakazaka fanandramana (Chapter 4), ary na dia mahakasika azy ireo ao amin'ny dingana fikarohana mivantana (Chapter 5).